Black Shark 2 Pro: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah | Androidsis
Black Shark 2 Pro: Xiaomi casriga casriga ah ee ciyaaraha
In yar usbuuc ka hor ayaa la muujiyaytaariikhda soo bandhigida ee Xiaomi Black Shark 2 Pro. Aaladda casriga ah ee casriga ah ee nooca Shiinaha ayaa ugu dambayn rasmi ah. Qalab ay shirkaddu dooneyso inay dib ugu xaqiijiso booskeeda oo ah mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan ee suuqan illaa hadda. Waxay ku sameeyaan moodel u muuqda xooggiisa.
Toddobaadyadan ayaan horay u aragnay taas waxqabadka dhibaato ku noqon mayso taleefanka. Kadib ASUS ROG Telefoonka II soo bandhigay laba toddobaad ka hor, Black Shark 2 Pro waa telefoonka labaad ee suuqa ku imanaya Snapdragon 855 Plus ka processor ahaan, culeyska ugu awoodda badan ee maanta jira.
Naqshadeynta taleefanka wuxuu hayaa khad la mid ah moodooyinka hore ee sumadda Shiinaha. Gooladaha gadaal ayaa ka sarreeya dhammaantood, oo markan ku yimid afar midab: Bolt (madow-cagaaran), Racing (buluug-casaan), Flamingo (casaan-madow), Xaragada Blade (buluug-buluug) iyo Myth Ray. (buluug buluug ah). Marka waxaan wajaheynaa naqshad aad u cayaareed.
1 Tilmaamaha Xiaomi Black Shark 2 Pro
Tilmaamaha Xiaomi Black Shark 2 Pro
Naqshadeynta ayaa laga yaabaa inay ka tagto isbeddel yar ama warar, laakiin Xiaomi waxay hubisay inay soo bandhigto isbeddelo badan oo ku saabsan gudaha gudaha Black Shark 2 Pro. Marka waxaan helnaa taleefan awood badan, oo leh processor-ka ugu fiican arimahan. Marka waxaan ku raaxeysan karnaa ciyaaro dhaadheer. Moodal lagu guuleysan karo qaybtan suuqa. Kuwani waa faahfaahinta taleefanka:
Shaashadda: 6.39-inch AMOLED oo leh Go'aan: 2340 x 1080 pixels, saamiga: 19.5: 9 iyo Heerka Refresh: 240 Hz
Kaydinta Gudaha: 128/256/512GB
Kaamirada gadaal: 48 MP + 13 MP oo leh fur f / 1.75 iyo f / 2.2 oo leh 2x zoom iyo LED Flash
Kaamirada hore: 20 xildhibaan leh fur f / 2.0
Xuduudaha kala duwan: Dual band WiFi, USB-C, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, 4G / LTE
kuwa kale: Shaashadda shaashadda sawirka indhaha, NFC, Liquid qaboojinta 3.0, DC Dimming 3.0
Battery: 4000 Mah oo leh 27W lacag deg deg ah
Cabbirada: 163,61 x 75,01 x 8,77mm.
Nidaamka hawlgalka: Android 9 Pie oo leh MIUI
Mid ka mid ah isbeddelada waaweyn ee ku jira Black Shark 2 Pro ayaa horeyba u yimid shaashaddiisa. Nooca Shiinaha ayaa nooga tagaya guddi cabbirkiisu yahay 6,39 inji, laakiin taasi waxay u taagan tahay heerka cusbooneysiinta ee 240Hz. Waa qadar gaar ah oo casriga ah, kaas oo na siin doona khibrad isticmaale oo aad u badan kiiskan. Dhinac hubaal ka guuleysanaya isticmaaleyaal badan oo arrintan la xiriira. In kasta oo tirada ciyaar is waafajisa ay kooban tahay xilligan.
Waxaan helnaa kamarad gadaal ah, oo leh 48 MP shidma weyn iyo 13 MP dareeraha labaad. Halka dhinaca hore aan ku leenahay 20 MP sensor. Bateriga ayaa ah dhinac kale oo muhiim ah oo ku jira Black Shark 2 Pro, oo leh awood dhan 4.000 Mah. Waxay na siin doontaa ismaamul wanaagsan oo sidoo kale waxay la socotaa lacag degdeg ah oo ah 27W. Marka si dhakhso leh ayaan u soo oogi karnaa batteriga oo dhan. Dareeraha faraha ayaa lagu dhex daray shaashada taleefanka. Intaa waxaa dheer, astaanta Shiinaha ayaa nooga tagaysa DC Dimming 3.0 iyo nidaam qaboojiye dareere ah oo cusub, si loogu fiicnaado qalabka.
Taleefanka ayaa lagu shaaciyay xilligan Shiinaha, oo ah suuqa kaliya ee lagu xaqiijiyay inuu bilaabmay. Waxay u badan tahay inaan sugno dhowr toddobaad inta ay ka bilaabeyso Yurub. In kasta oo taleefannada calaamadduhu aysan haysan qaybinta ugu fiican Yurub. Marka waxaa laga yaabaa inaan sugno xoogaa in ay si rasmi ah u timaado. Waxaan dheg u noqon doonnaa wararka.
Black Shark 2 Pro ayaa lagu iibinayaa laba nooc oo Shiinaha ah, oo qiimahoodu horeyba rasmi u ahaa. Waxay naga caawinayaan inaan helno fikrad ah waxa taleefankan ku kici karo markii laga furo Yurub. Labada nooc iyo qiimahooda waa:
Moodelka leh 12/128 GB waxaa lagu qiimeeyaa 2.999 yuan (390 euro qiimaha sarifka)
Nooca leh 12/256 GB waxaa lagu bilaabay qiime dhan 3.499 yuan (456 euro isbeddelka)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Black Shark 2 Pro: Xiaomi casriga casriga ah ee ciyaaraha
Google Pay wuxuu la jaan qaadayaa bangiyada cusub ee Spain
Iskuxirka cusub ee Android Auto ayaa ugu dambeyn la heli karaa